ပက်ပက်စက်စက်ကိုတန်သော Laptop - PX
လက်ရှိပေါက်ဈေးအနေအထားမှာ ပက်ပက်စက်စက်ကို တန်နေတာပါ။ တန်တာမှ Xiaomi ရဲ့ NoteBook Air, NoteBook Pro နဲ့ Gaming Book တို့ထက်ကိုတန်ပါတယ်။ ဈေးကတန်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ ပစ္စည်းက အချာပင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ??
အိုကေ Brand အကြောင်းလေးစလိုက်ရအောင်…
Brand ကတော့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပေါ်တဲ့ Brand ပါ။ လိုက်ကြည့်မိသလောက် အရင်ကထွက်ခဲ့တာတွေ မတွေ့မိပါဘူး။ Brand Name က OVERPOWERED ပါ။ Logo အနေနဲ့ Shortcut Name လေးအဖြစ် OP ဆိုပြီးပုံဖော်ထားပါတယ်။
OVERPOWERED က ဘယ်နိုင်ငံကလဲ???
OVERPOWERED ကို Esports Arena Gaming Community တည်ဆောက်တာပါ။ Esports Arena ဆိုတာ American နိုင်ငံ California ပြည်နယ် Orange Country တို့ Oakland တို့မှာရှိတဲ့ Gaming Community တစ်ခုပါ။ အဲ့ Community ကနေ OVERPOWERED Branding ကိုလုပ်ပြီး Gaming Laptop တွေ PC တွေကိုထုတ်ရောင်းတာပါ။ Made In China လားဆိုတော့… ??? ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် တရုတ် Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tong Fang ကနေထုတ်လုပ်တာပါ။
လက်ရှိထုတ်ထားတာတော့ Gaming Laptop တွေပဲထုတ်ထားတာပါ။ Model သုံးမျိုးရှိတယ်။ Gaming 15, Gaming 15+, Gaming 17+ Laptop3ခုလုံးမှာတူညီတာတွေက Mechanical RGB LED Keyboard တွေကိုသုံးထားတယ်။ 16 Million RGB Color နဲ့ Brown Switches Keyboard ပါ။ Keyboard ပိုင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး Clicky သိပ်မဖြစ်ဘူး၊ Mechanical မဆန်ဘူး ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေတယ် သုံးကောင်းတဲ့ပါတယ်လို့ Review တွေပေးကြပေမဲ့ Specs အရ Great Value သတ်မှတ်ခြင်းတွေခံရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Display ပါ 144Hz Refresh Rate နဲ့ Full HD Resolution ရှိတယ် ဘာ Panel သုံးထားလဲမသိပေမဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Result တွေပေးခြင်းခံရပါတယ်။
Design နဲ့ BQ ပိုင်းမှာဆိုရင် ကျောဘက်ကို Brush Aluminum ကိုသုံးထားတယ်၊ ဘေးဘောင် အပါးလေးတွေနဲ့ Gaming Design ကိုမှ Slim Profile and Maximum Power ပုံစံမျိုးဖန်တီးထားပါတယ်။
Specs နဲ့ Price
– 15.6 144Hz Screen
– GTX 1050 2GB VRAM
– Mechanical RGB LED keyboard
– SSD 128GB + 1TB
မြန်မာငွေလက်ရှိပေါက်ဈေး 8 သိန်းဝန်းကျင်
*a weird balance the 1050 can’t push the full 144fps that is on this panel :3
အနည်းဆုံး 1060 လောက်ရှိမှ Over 144fps ထိသုံးလို့ရမှာပါ
– Intel i7-8750H
– SSD 256GB + 1TB
မြန်မာငွေလက်ရှိပေါက်ဈေး 13 သိန်းဝန်းကျင်
– 17.3 144Hz Screen
– SSD 256GB + 2TB
မြန်မာငွေလက်ရှိပေါက်ဈေး ၁၆ သိန်းဝန်းကျင်
အချုပ်အားဖြင့် Battery ပိုင်းတွေ သေချာမသိရသေးပေမဲ့ ဒီဈေး(လက်ရှိပေါက်ဈေး)နဲ့ ဒီ Specs ဆိုရင် အတော်လေးကို ပက်ပက်စက်စက်တန်တဲ့ Laptop တွေပါ။ Mechanical ဆန်မဆန် အသာထား နှိပ်လိုက်လို့ Mechanical အသံထွက်တယ်ဆိုရင် ရတဲ့ Feel နဲ့ဈေးကတန်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်သာဝင်လို့ကတော့ ရှယ်ပဲဗျာ။ စာရေးသူ စိတ်ဝင်စားနေတာက 15+ လေးပါ။ ဝယ်မယ်ဆိုရင် www.walmart.com မှာပဲ ဝယ်လို့ရမှာပါ။
(ဈေးကတော့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလေ့ရှိပါတယ်၊ ဖော်ပြထားတဲ့ဈေးက ပိုစ့်ရေးနေတုန်းကဈေးပါ)
Photos : Bob of All Trade, Overpowered & Tomshardware